BADKA QABASADAY SUUQA BAKAARAHA: [Laba Warbixinood]
Afar gaaanacsato ah oo lagu toogtey Suuqa Bakaaraha
Saddex Qof ayaa Ku Dhintay Dab Qabsaday Bakaaraaha
ilaa iyo sadex ruux ayaa ku dhimatay inta la og yahay 2 kalena way ku dhaawacantay suuqa bakaaraha kadib markii uu Abaarihii 10:45 (fiidkii) uu dabweyni qabsaday suuqa. Dabkaas ayaa waraka qaar sheegayaan in uu ka kacay burjiko dab looga tagay, hase ahaatee majiraan warar sugan oo xaqiijinayana sababta dhabta ah ee uu dabku ka kacay, ma dhicin wax gurmad ah oo dabka lagu daminayo oo sidaa u buuran oo uu suuuqu helay oo aan ka aheyn dadweyne sacaboolay ah oo baaldiyo biyo ku daldalayay, hase ahaatee goor dambe oo si xeeladaysan loo go'doomiyay dabkii oo uu soo koobmay ayaa waxaa goobtii yihid hal booyad, tiiyoo ay muqdisho yaalaan ilaa 3 dex dab damis oo casri ah hase yeeshee aan soo gurman.
Ma ahan markii ugu horeysay ee uu suuqa bakaruhu gudto ee waa markii sadexaad muddo 10 sano gudahood ah.
waxaa warkan soo diray suxufi madaxbanaan
Cabdi Axmed Warsame 'Gaashaanle'
Gubashada Bakaaraha ... Musiibo soo noqnoqotay
Warbixintii: Axmad C/samad dacwah@hotmail.com
Ugu horrayn waxaan leenahay: (Alle ayaa na leh, isaga ayaanuna u noqonaynaa, Allow musiibadayada naga ajar sii wax ka khayr badanna noogu badal), walaalahayaga ku waayay dhacdadaas hantidoodana waxaan leenahay: ( Alle ayaa leh wixii uu qaato & wixii uu baxsho shay kastana agtiisa wuxuu ku leeyahay waqti go'an) waxaana ugu yeeraynaa inay Alle ugu sabraan dhibtaas ku dhacday, waxaana uga baryaynaa inuu wax ka khayr badan ugu badalo.
Waxaa xalay dab qabsaday qayb ka mid ah suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, waxaana si buuxda u gubtay qaybta bacadlaha dharka ee suuqaas, waxaana qayb ka qaatay sii holcinta dabkaas hub & rasaas fara badan oo yaallay bakhaarrada iyo goobaha kale ee ganacsiga. Gubashada suuqaan oo ah tii 3aad oo soo marta muddadii fawdada ayaa mar walba ganacsatada Soomaaliyeed ku waayayeen hanti aad u fara badan, waxaa kaloo ku dhacmayay dad kale oo goobaha ganacsiga dhigtay hantidooda. Waxaa lagu toogtay suuqa xalay 4 qof oo qaarkood ay ahaayeen ganacsato, waxaana lagu dhaawacay tiro intaas ka badan, taasina waxay ka dhalatay markii ay suuqa ku soo yaaceen dad badan oo isugu jiray ganacsato, gurmad & burcad, waxaa kaloo horay suuqa u joogay ciidammadii ilaalinayay, ka dibna waxaa la kala garan waayay burcaddii & dadkii wax badbaadinayay, maxaa yeelay cid waliba way hubaysan tahay rasaasna way ridaysaa. Waxaa kaloo carqaladeeyay hawlaha dab daminta waddooyinka oo horay loo dhistay oo aysan suuragal ahayn in gawaarida dab damiska & booyaduhu si dhaqsa ah u soo galaan. Waxaa kaloo qayb ka ahaa dib u dhaca hawlaha dab damiska rasaas aad u fara badan oo ka dhacaysay suuqa & hareerihiisa. Dad badan waxay la tahay in faafista dabka & hoosaynta heerka wax ka qabadkiisa ay sabab u tahay inaysan jirin cid loo qayshado oo dareensan xilka ka saaran badbaadinta bulshada & hantideeda.
Maxaa u sabab ah gubashada suuqaan:
Dadku way ku kala argti duwan yihiin soo noqnoqoshada gubashada suuqaan, sababaha loo aanaynayana waxaa ugu muhiimsan:
1. Suuqyadeennu waxay u gubanayaan waa ciqaab rabbi oo ka timid xadgudubyada qaarkeen ku samaynayo goobaha ganacsiga sida: Ribada, qishka, khiyaanada, waddooyinka laga samaystay goobo ganacsi, dad guryohood oo lagu ganacsado ama hortooda la dago, sakada oo aan la wada bixin iyo xuquuqda kale oo maalka laga rabo oo lagu bakhaylay. Waliba dad ayaa ii sheegay in seddexda jeer ee suuqu gubtay ay wada ahaayeen bisha safar ee tan ka horraysa sakada la bixiyo (sakada baaqatay ayuu la gubtay suuqu).
2. Cadaw shisheeye (gaalo) oo si ula kac ah u guba xoolaha ummadda markii ay xoogaa shaqaystaanba, si aynu u noqonno sabool ayaga gacmaha u hoorsada, waxaana u fuliya hawshaas jawaasiis & daba dhilifyo u jooga dalkeenna. Dadka qaarkoodna waxay warinayaan inay arkeen dad wata caagag & dhalooyin baasiin ah oo gubaya qaybo ka mid ah suuqa!!!. Dhab ahaan la yaab ma aha in cadawgeennu dhib inoo gaysto ee waxaa la yaab ah inaynu waqti dheer ku jirno xaalad cid waliba wax ina yeeli karto oo aynaan diyaarna u ahayn inaynu ka baxno xaaladdaas liidata.
3. Waxaa ka dambayn kara burcad isku xiran oo ujeeddadeedu tahay inay dhacdo hantida ummadda ayagoo ku dhexgabbanaya gubashada & walaahowga dadka ku soo aruuraya suuqa.
4. Habka suuqu u samaysan yahay ayaa sabab u ah gubashadaan soo noqnoqotay, maxaa yeelay:
� goobaha ganacsigu waxay u badan yihiin qoryo & jiingado gubashada u nugul.
� qaar kalana waa gaari gacanno alaabi ku raran tahay oo yaal jidadka suuqa dhex mara, waana wax asna gubashada u nugul.
� kuwa kalana waxay dhigtaan alaabta dariiqyada suuqa markay ka tagayaanna waxay ku dadaan jawaanno.
� tan kale waddooyinka dhex mara suuqa ayaa la wada dhistay oo waddooyinka badankooda waxaa dhib ah in laba qof isku waydaarato.
� waxaa kaloo muuqda badeecooyinka oo is dhex yaal, sida caws, shidaal, burjiko dab ah, dhar � iwm. Qaab darrada noocaan ahi ayadaa sabab u ah gubashada & wax ka qabad la'aanta.
� Iskaashi la'aanta dadwaynaha Muqdisho gaar ahaan gancsatada, tusaale ahaan: marka dhibkaani dhacay waxaa loo baahday cid si guud xilka u qaadda oo sugta nabadgalyada suuqa kuna dhaqaaqda daminta dabka ayadoo kaashanaysa ciddii ay u baahato oo ay ku kalsoon tahay.
Sidee looga bixi karaa dhibtaan?:
Waxaa dadku iswaydiinayaa sida ugu habboon oo lagu xallin karo dhibtaan, sidaa darteed waxaynu eegaynaa siyaabaha ugu mudan ee ku munaasibka ah xaaladdaan:
1. In la sameeyo guddi guud oo ka kooban ganacsatada, maxkamadaha islaamiga ah & dalladda culimada oo ku dhaqaaqa wax ka qabadka arrintaa.
2. in la dumiyo dhismayaasha ku yaal waddooyinka dhex mara suuqa, lagana mamnuuco cid kastoo doonaysa inay ku shaqaysato mar dambe.
3. In la soo iibiyo gawaarida dabka damisa, goobaha ganacsigana la dhigo dab damisyo yar yar.
4. In suuqa dhexdiisa la soo galiyo tuubbooyin biyo ah oo la adeegsan karo xilligii dab dhasho.
5. in la dajiyo habka ugu habboon oo loo damin karo dabka, waddooyinka ugu dhaw oo laga soo gali karo aagga gubta.
6. In lagu wareejiyo suuqa oo dhan ciidan ka kooban kan maxkamadaha & waardiyaha suuqa, ciidan kalena loo xilsaaro daminta dabka, dadkana loo sheego in guddigu daminayaan dabka ayagoo kaashanaya ciidanka.
7. In la joojiyo hantida badan ee la dhigayo meel kooban oo waliba u badan jiingado & carshaan, ganacsataduna ay suuqa ballaariyaan oo joojiyaan meelaha yare e ay isku cariiryayaan.
8. In ganacsatadu ka fogaadaan wax kasta oo khilaafsan diinteenna Rabbi caradiisana keenaya, ayna bixiyaan sakada & xuquuqda kale ee lagu yeeshay maalkooda.
9. Intii suuragal ah in la kala saaro badeecooyinka, lagana fogeeyo suuqa walxaha qarxa ama gubashada sameeya sida: shidaalka, dabka, cawska iwm.
10. In dadwaynaha lagu wacyigaliyo iskaashiga & ka hortagga dulmiga & burcadnimada, si gaar ahna bulshada loo dareensiiyo khatarta ay leedahay cunista xaaraantu.
11. Ganacsatadu inay Rabbi ka baryaan inuu u xafido naftooda, ubadkooda & maalkoodaba ayna ku dhaqaaqaan tillaabooyinka Alle wax ku xifdiyo.
Ugu dambayntii khaladaadka jira waxaa galay dadka qaarkood, waxaase xusid mudan in haddii inta kale ay xumaanta ka celin waydo ay la wadaagayaan ciqaabta Rabbi, sidaa darteed waxaa habboon in aynu nafteenna & walaalaha khaladka galayba badbaadinno.
Qore: Axmad C/samad dacwah@hotmail.com